ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2018 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
637650 Views so far
သင့်အခန်းနံရံမှာ ဘာပန်းချီကား ချိတ်မလဲ . . .
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 7, 2018 နေ့
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျောင်းနေဖက်ငယ်သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသော မိုးကျော်၊ ဖိုးထော်နှင့် စိုးမော် ဆိုသူတို့ ရောက်ရှိလာကြလေ သည်။ သူငယ်ချင်းသုံးဦးတွင် စိုးမော်မှာ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းမှာ စိုးစိုးမော်ဟူ၍ဖြစ်ပြီး မိုးကျော်၊ ဖိုးထော်တို့နှင့်တွဲကာ သူ့ကိုလည်း စိုးမော်ဟုသာ ခေါ်ခဲ့ကြ၏။
၎င်းတို့သုံးဦးသည် ကျွန်ုပ်တည့်ခင်းဧည့်ခံသော မနောမယလက်ဖက်ရည်ကို သောက်ကြလေ၏။ စိုးမော်က တစ်ဝက်သာသောက်ပြီး၊ မိုးကျော် က နှစ်ခွက်ဆင့်၍ သောက်လေ၏။ စိုးမော်က –
“ဒီလိုသူငယ်ချင်းရေ . . . တစ်ချို့ရုံးခန်းတွေ၊ အလုပ်ခန်းတွေမှာ ပန်းချီကားကြီးတွေ ကျကျနန လှလှပပ ချိတ်ထားတာ ငါဖြင့်အရမ်း သဘောကျတာပဲ။ ငါတို့အလုပ်ခန်းတွေမှာလည်း အဲဒီလို ပန်းချီကားကြီးတွေ ကျကျနန ချိတ်ချင်တယ်ဟာ။ ငါတို့သူငယ်ချင်း ဗေဒင်ဆရာကြီး တစ်ယောက်လုံးရှိနေတာဆိုတော့ ဒီအတိုင်း ရမ်းပြီးချိတ်မယ့်အစား သူငယ်ချင်းပြောပြတဲ့ပန်းချီကားတွေ ချိတ်မယ်ဆိုပြီး သုံးယောက်သား တိုင်ပင်ပြီး လာခဲ့ကြတာဟေ့ . . .။” ဟု ၎င်းင်းတို့လာရင်းကိစ္စကို ပြောပြကြလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း စီးကရက်ကို နှစ်ဖွာခန့်မျှဆက်၍ဖွာလိုက်ပြီး သည့်နောက် –
“ဇမ္ဗူဒီပါလက်ယာတောင်ကျွန်းမှာ ဩဘာနိမိတ်ထွန်းသတဲ့ . . ။ တစ်ချို့လည်း ဓါတ်ဘိသိက်ပန်းချီဆိုပြီး တကူးတက ပန်းချီဆရာဆီမှာ အပ်ပြီး ဓါတ်ပန်းချီကားတွေ ဆွဲခိုင်းလေ့ရှိတယ် . .။ နင်တို့အနေနဲ့ ရှိပြီးသားပုံတွေ ဝယ်လို့ကူးလို့လွယ်မယ့်ပုံတွေကို ချိတ်ချင်သပဆိုရင်လည်း ချိတ်ကြပေါ့ . . .” ဟုပြောလိုက်ရာ ဖိုးထော်က –
“အေး၊ အဲဒီလိုပဲ လုပ်စမ်းပါကွာ . . .။ ငါတို့ကလည်း အချိန်သိပ်ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ဘူးကွ”ဟုပြောရင်း လက်ကျန်လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို တစ်ကျိုက်တည်း မော့ချလိုက်လေ၏။
“အေးပါကွာ လွယ်လွယ်သာလုပ်ပါ သူငယ်ချင်းရယ် . . .။ ခေတ်ကပြောင်းသွားပြီကွ . . .။ ဟိုးရှေးတုန်းကဆိုရင် ကုန်ပစ်္စည်းကြော်ငြာ မှာတာတောင် မဂ်္ဂဇင်းတစ်မျက်နှာလောက် စာတွေ စီကာပတ်ကုံးရေးပြီး အရှည်ကြီး ကြော်ငြာကြတာ . . .။ ဒီခေတ်မှာကတော့ လိုရင်းတိုရှင်း ထိထိမိမိပဲ ကြော်ငြာကြတော့တယ်ဟေ့ . . .။ အဲဒီတော့ ဆရာသမားရဲ့ ဓါတ်ဘိသိက်ပန်းချီကိုလည်း အကျယ်ချဲ့တဲ့ နည်းတွေနဲ့တော့ လာမပြော ပါနဲ့ကွာ . . .” ဟု ဝင်၍ ထောက်ခံလေ၏။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်း ပြုံး၍ –
“အေးပါကွာ . . . ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုသတိထားဖို့ကတော့ အလုပ်ခန်းတွေ ရုံးခန်းတွေမှာ မကောင်းတဲ့သဘောသက်ရောက်တဲ့ အနိဋ္ဌ သဘောဆောင်တဲ့ ပုံမျိုးတွေတော့ မချိတ်အပ်ဘူးကွ” ဟု ပြောလိုက်လျှင် စိုးမော်က –
“အေးပါဟယ် . . .။ ငါတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံတွေချိတ်ရမလဲ ဆိုတာသာ ပြောပါတော့ ” ဟု လောဆော်ပါလေတော့၏။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က –
“ ကဲ— ကဲ — အဲဒါဆိုလည်း မှတ်စုနဲ့သာမှတ်ပြီး ယူသွားကြပေတော့။ —။ တော်ကြာ မောင်လေးအတွက်၊ ကြီးတော်အတွက်၊ အဖေ့ အတွက်၊ ကြီးတော်အတွက်၊ အဖေ့အတွက် ဆိုပြီးမေးနေကြဦးမယ် — ” ဟု ပြောပြောဆိုဆိုပင် မိမိတို့၏ မွေးနေအလိုက် အောင်မြင်ခြင်း၊ လာဘ်ရွှင်ခြင်း၊ လူချစ်လူခင်ပေါများခြင်း၊ စသောကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ရရှိစေနိုင်မည့် ပန်းချီပုံများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောပြလိုက်ရပါ လေတော့သတည်း —။
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – သိကြာမင်းပုံ။ သစ်ပင်ကြီးကြီးမားမား လှလှပပပုံ။ သမင်ပုံ။ ကျားပုံ။
တနင်္လာသားသမီးများ – နတ်သား နတ်သမီးပုံ။ နေထွက်စ ရှုခင်းပန်းချီကားပုံ။ ထန်းပင်၊ ထန်းတောပုံ၊ ဆင်ပုံ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ – ကြေးအိုလှလှပုံ၊ ငွေအိုးလှလှပုံ။ ပန်းအိုလှလှပုံ၊ ကမ်္ဘာ့မြေပုံ။ ကျားပုံ။ မြင်းပုံ။
ကြာသပတေးသားသမီးများ – စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလပုံ။ ဆိပ်ကမ်းရှု့မျှော်ခင်းပုံ။ စကြာတံဆိပ်ပုံ။ စောင်းပုံ။ ဆင်ပုံ။
သောကြာသားသမီးများ – လှေပုံ၊ လှည်းပုံ။ ဇင်ယော်ပုံ။ ဆိုင်းဝိုင်းပုံ။ ဆင်ပုံ။
စနေသားသမီးများ – ဘုရားစေတီပုံတော်။ ပန်းအိုးလှလှပုံ။ မြင်းပုံလှေပုံ။ မီးအိမ်ပုံ။
Source – Myanmar Home & Decor magazine (Volume 4, Issue 2)
Pomelo ရဲ့ အလင်းရောင်
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2018 နေ့
ရေးသူ – သက်ထင်
လူဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် အရာတွေထဲမှာ စားဝတ်နေရေးလိုအပ်ချက်အတွက် နေ့စဉ်ဝင်ငွေဆိုတာ လိုအပ်လာပါတယ်။ တချို့တွေအတွက်ကတော့ ကိုယ်တိုင် အထူးတလည်ကြိုးစားစရာမလိုအောင် မိဘတွေဘက်က ဖြည့်ဆည်းပေးထားနိုင်ပေမယ့်၊ တချို့တွေ အတွက်ကျ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစား အားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လူတွေအတွက်တောင် တော်ရုံမလွယ်ကူတဲ့အချိန်မှာ တစ်နေရာရာမှာ အားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျ Pomelo လို အဖွဲ့အစည်းများက အဓိက အားထားစရာဖြစ်နေပါတယ်။ Pomelo of Myanmar ဆိုတာက HIV ဝေဒနာသည်တွေ၊ မသန်စွမ်းသူတွေ၊ မျက်မမြင်တွေ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို လက်မှုပညာသင်ပေးသလို သူတို့တတ်ထားတဲ့ လက်မှု ပစ္စည်း တွေကိုလည်းစုဆောင်းပြီး ဆိုင်မှာ တစုတဝေးတည်း တင်ရောင်းပေးထားတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ကလည်း အပြင်မှာ အလုပ်မလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ မိမိအိမ်မှာပဲနေရင်း လုပ်ကိုင်လို့ရမယ့် အလုပ်လေးတွေကို ထောက်ပံ့ပေးပြီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ Pomelo of Myanmar နဲ့ပက်သတ်သမျှကို ဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သူ မမြင့်မြင့်ရီနဲ့ ယခုလိုတွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – Pomelo of Myanmar ကို စတင်တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ – စတင်ပြီးတော့ ဒီဆိုင်လေးကို ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့တာက ရန်ကုန်မှာဆို ပထမဆုံးပေါ့နော် ၂၀၁၂ ခု ဇန်နဝါရီ ၁၃ မှာပါ။ အခု သိမ်ဖြူလမ်းမှာပဲ Moonsoon အပေါ်ထပ်မှာစတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းတဲ့သူ၊ အားနည်းချက်ရှိသူ၊ ဝင်ငွေမရှိတဲ့သူတွေအတွက် နေထိုင်မှုဘဝတိုးတက်စေဖို့အထောက်အပံ့ကောင်းလေးဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဆိုင်စစ ဖွင့်ချင်းတုန်းက လူသိနည်းတဲ့အပြင် တစ်ရက်ရောင်းအားက အနည်းငယ်သာရှိတာကြောင့်ဆိုင်လေး ဆက်လက်တည်မြဲနိုင်ပါ့မလားလို့ တွေးပူခဲ့ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားကို မှီခိုနေတဲ့လက်မှုပညာရှင်တွေ အဆင်ပြေနိုင်မယ့်အရေးတွေကြောင့်ဆက်ရပ်တည်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလည်း သူများနဲ့ မတူတာမျိုးကို ဖန်တီးပြီးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
မေး – Pomelo မှာ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲအစည်းပေါင်းမည်မျှ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ – စဖွဲ့တုန်းကတော့ အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့၊ ၅ ဖွဲ့ လောက်နဲ့ စဖွဲ့ခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ HIV ဝေဒနာ သည်တွေပါ။ အခုတော့အဖွဲ့ပေါင်း ၅ဝ ကျော်နေပါပြီ။ အဓိက ကတော့ မသန်စွမ်းသူတွေ၊ မျက်မမြင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့ လက်မှုပညာတတ်ပြီး မိသားစုလက်ငုတ်စီးပွါးရေးပဲ ဦးစားပေးလုပ်နေရတယ်။ ဝါသနာပါပေမယ့် သူတို့လက်မှု ပစ္စည်း တွေကို တင်ရောင်းပေးမယ့်သူမရှိဘူး အဲ့လို သူမျိုးတွေလည်း ပါပါတယ်။ Pomelo ကနေ အရမ်းအခက်အခဲ ရှိတဲ့သူတွေအတွက် သူတို့လုပ်ထားတာကို သေချာကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်မှာတင်ပေးပါတယ်။ အပြင်မှာ အလုပ်မရနိုင်တဲ့သူတွေကို အထူးအခွင့်အရေး ပေးထားတဲ့ဆိုင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအနေနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးအဆောင်တွေကို ရောင်းချပါသလဲ။ အမျိုးအစားပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
ဖြေ – ထုတ်ကုန်ပစ်္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း ထောင်ကျော်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စာအုပ်တွေရှိမယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်တွေရှိမယ်။ ကူရှင်ကာဗာတွေရှိမယ်။ အမှတ်တရကတ်တွေလည်း ရှိတယ်။ Accessories တွေလည်း ရှိတယ်။ ဆွဲကြိုးတို့ နားကပ်တို့ ဒါတွေ အားလုံးက အကုန် ဟန်းမိတ်တွေပါပဲ။ အဖွဲ့တွေက လုပ်ထားတဲ့ ပစ်္စည်းတွေပါ
မေး – Recycled and Up Cycled ပစ်္စည်းတွေအသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ထိုအရာတွေကို အခြေခံထုတ်လုပ်ဖိ်ု့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို သိပါရစေ။
ဖြေ – ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုဆို သေချာမသိကြဘူး။ စွန့်ပစ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့။ အမှိုက်ကနေပြန်ပြီးတော့ ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေက ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်လို Recycled ပြန်လုပ်လို့ရတာတွေပါ။ ပလတ်စတစ်တွေကို ဆေးကြောရတယ်။ သန့်စင်ပြီး အသုံးအဆောင်အနေနဲ့ ပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ဘောလ်ပင်ထည့်တဲ့အိတ်၊ Beach Bag တို့ ရှိတယ်၊ တာယာတို့ ကျွတ်(Inner Tube Tyer) တို့နဲ့လည်း ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့တခြားအရာတွေ ပြုလုပ်တာမျိုးရှိပါတယ်။
စက်္ကူရုပ်လေးတွေဆိုရင်လည်း သတင်းစာနဲ့ ပြုလုပ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ အသေးစားမိသားစုကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးပုံစံပြုလုပ်ကျတာပါ။ သူတို့က ရွာက ကလေးတွေကိုခေါ်တယ်။ လစာကောင်းကောင်းပေးတယ်။ ကျောင်းထားပေးပြီးတော့ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
မေး – လက်မှုပညာရှင်များအနေနဲ့က မည်သူတွေဖြစ်ပါသလဲ။
ဖြေ – နိုင်ငံခြားကနေလည်း Volunteer လာကူပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံကနေ လာပြီးတော့ သူတို့အချိန် အားရင် အားသလို ၃ လ သော်လည်းကောင်း ၆ လ သော်လည်းကောင်း လာကူပေးပြီး ဒီဇိုင်းလေးတွေသင်ပေးတယ်။ အရင်တုန်းက အလုပ်သမား ၂ ယောက်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာ ၁၂ ယောက် ၁၅ ယောက်လောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ Pomelo ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အပြင်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ မတူအောင် ဖန်တီးရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ လုပ်မယ့်အဖွဲ့တွေကို ခွဲပေးရတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမကောင်း ပြန်ကြည့်ပေးရပါတယ်။ အဖွဲ့တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သွင်းတဲ့ထုတ်ကုန်က မတူဘူး။ မတူအောင်လည်း လုပ်ပေးရတယ်။ အကယ်၍ အဖွဲ့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူတယ် ဆိုရင် ဒီအဖွဲ့ကပစ်္စည်းရောင်းရပြီး တခြားအဖွဲ့က မရောင်းရတဲ့ အခါမျိူးကျတော့ ဘာမှ အထောက်အကူမပြုဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် အဖွဲ့တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူအောင်၊ မတူညီတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲ ထားပေးတယ်။ အဲ့ဒါမှ အကုန်လုံးရဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းလို့ရမယ်။
အကုန်လုံးရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေ အကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်။
တခါတလေကျတော့လည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ခွဲပေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ စက်ချုပ်တတ်တဲ့သူတွေကိုဆို စက်ချုပ်တာနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ အပြင်မှာ ဝယ်လို့မရမယ့် ပုံစံမျိုး – ဥပမာ စက်္ကူရုပ်လေးတွေဆို ဘုရားစောင်းတန်းမှာ ရောင်းတဲ့ပစ်္စည်းလေးတွေနဲ့မတူအောင် ကိုယ့်ဘာသာ ဒီဇိုင်းထုတ် သူတို့ကို ဒီဇိုင်းချပေးပြီး လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
မေး – လူကြိုက်အများဆုံးရောင်းကုန် အကြောင်းကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အများကတော့ ပစ်္စည်းအကုန်လုံးကို ကြိုက်ကျပါတယ်။ တော်တော်များများက ရောင်းရတယ်။ အထူးသဖြင့် အိတ်လေးတွေပါ။ Flame Tree Group က ထုတ်ထားတဲ့အိတ်တွေဆို ကြည့်လိုက်ရင် တစ်အိတ်ထဲ လွယ်လို့ ရတယ်ထင်ရပေမယ့် လက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ၂ ဘက်လှ ဖြစ်လို့ တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ စက်္ကူခွေးရုပ်လေးတွေ၊ ကလေး အဝတ်အထည်တွေလည်း ရောင်းရပါတယ်။ ပစ်္စည်းတွေအကုန်ကတော့ ရောင်းရပါတယ်။
မေး – ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ လူကြိုက်များအောင် ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖြစ်ပါသလဲ။
ဖြေ – အပြင်မှာနဲ့ မတူညီတဲ့ပုံစံ၊ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကို အသားပေးရွေးချယ်ရပါတယ်။ ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ပုံတိုင်းကလည်း ရောင်းရမယ်တော့လည်း မမျှော်လင့်ဘူးပါဘူး။ ကိုယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းအပေါ်မှာ အရင်ဆုံး လုပ်ကြည့်တယ်။ ရောင်းအားကောင်းတယ် ဆိုတော့မှ ဒါကို ဆက်ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ နမူနာပစ်္စည်းလေးတွေ တင်ကြည့်လို့ လူကြိုက်မများဘူးဆိုရင်ပယ်ချပြီး နောက်ထပ် အသစ်ထပ်ပြောင်းကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကထုတ်တဲ့ ဒီဇိုင်းအသစ်လေးတွေ မှန်သမျှ တစ်ခုမှတော့ မပယ်ချရသေးပါဘူး။
မေး – Pomelo ဆိုင်ခွဲပေါင်း မည်မျှရှိပါသလဲ။ ဆိုင်လိပ်စာတွေကို ပြောပြပေးပါဦးနော်။
ဖြေ – ဆိုင်ခွဲက ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ နောက်တစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဆိုင်နေရာတော့ ကျဉ်းပေမယ့် တင်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်း တွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာကွာသလဲဆိုတော့ သိမ်ဖြူဆိုင်ကကြီးတော့ပစ္စည်းလည်း များတယ်။ ရွေးစရာလည်း အများအပြားရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးဆိုင်လေးက နည်းနည်းလေး ကျဉ်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ပစ္စည်း အမျိုးစုံအောင် တင်ပေးထားပေမယ့် အရေအတွက်တော့ နည်းပါတယ်။ ခုလောလောဆယ်အထိတော့ ဆိုင်အနေနဲ့က သိမ်ဖြူလမ်းဆိုုင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကဆိုပြီး ၂ ဆိုင်ပါပဲ။
မေး – ကလေးများအတွက် လက်မှုသင်တန်းလေးတွေပါ ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ပုံကို ရှင်းပြပေးပါဦး။
ဖြေ – ဒီတစ်နှစ်လောက်မှာတော့ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတော့ ကလေးတွေရယ် နောက်ပြီး လိုအပ်တယ်ဆိုရင် နယ်တွေအထိကို်ယ်တိုင်သွားတယ်။ မိဘမဲ့ကျောင်း မေမြို့၊ မန္တလေး၊ ဖောင်တော်ဦးကျောင်းတို့ကို ကိုယ်တိုင်သွားတယ်။ မေမြို့မှာဆိုရင် နယ်ပေါင်းစုံကလာပြီး ကျောင်းတက်ကြတဲ့ မိန်းကလေး ၆၄ ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။ တချို့ကမိဘ မရှိတာတို့၊ တချို့က မိဘတစ်ပါးပဲ ရှိပြီး အလုပ်အကိုင်မရှိတဲ့သူတွေပါ။ ဖွားသီလရှင်တွေက စက်ချုပ်သင်ပေးတယ်။ Pomelo ကဒီဇိုင်းလေးတွေ ချပေးတယ်။ နမူနာ တစ်ခါတည်းချုပ်ပြခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းကျ သူတို့ကနေ ချုပ်ပြီးတော့ အောင်ဆန်းကွင်းကို ပို့တယ်။ ကိုယ်ကသွားယူပြီး သူတို့အတွက် ဆိုင်မှာ ရောင်းချပေးရပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ရာသီကျချိန်တွေဆိုရင် အဖွဲ့တွေကို လိုက်ကြည့်ပြီး သူတို့ ဘာလိုအပ်သလဲဆိုတာ လုပ်ပေးပါတယ်။
မေမြို့မှာကျတော့ခရစ်ယာန် ဖွားသီလရှင်ကျောင်း။ သူတို့က ကလေးနည်းတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ။ ဖောင်တော်ဦးက ကျတော့ နာမည်ကြီးပဲ။ ဘုန်းကြီးစာသင်ကျောင်း။ ကျောင်းကတော်တော်ကျယ်တယ်။ ဘုန်းကြီးတွေလည်း တော်တော်များတယ်။ မိဘမဲ့ကလေးတွေ အများကြီးပဲ။ နာဂစ်က ကလေးတွေလည်းပါတယ်။ အိမ်တွေကလည်း အများကြီးပဲ။ သူတို့က ရေဗူးအိတ်လေးတွေ၊ ဖုန်းအိတ်လေးတွေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အောင်ဆန်းကွင်းကနေတဆင့် ပစ်္စည်းပို့ပြီး ဒီမှာ တင်ရောင်းပါတယ်။Pomelo ဆိုင်စဖွင့်တုန်းက မပါပဲ နောက်ပိုင်းမှ ဘုန်းဘုန်းနဲ့သွားတွေ့ ဖြစ်ပြီး သူတို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပါ ဆိုင်မှာ တ င်ရောင်းဖြစ်တာပါ။
မေး – Pomelo of Myanmar အနေနဲ့ ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေကို သိပါရစေ။
ဖြေ – ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ Pomelo နဲ့အတူအားလုံးက ကြိုးစားနေပါတယ်၊ အဖွဲ့အားလုံးက ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ နောက်ဆိုင်ခွဲလေးတွေ ဖွင့်နိုင်အောင်လို့ပါ။ ဆိုင်ခွဲတစ်ဆိုင်ဖွင့်ရင် တစ်ဆိုင်ပိုရောင်းရတဲ့အတွက် လိုအပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆိုင်ခွဲတွေ ပိုတိုးလာတဲ့အခါ သူတို့တွေလည်း တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ အဖွဲ့အစည်းလေးတွေနဲ့ အတူတူသွင်းပြီးတော့ Pomelo နဲ့ လက်တွဲလုပ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနဲ့ အများအကျိုးပြုနိုင်အောင် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Pomelo ဆိုင်တွေ တစ်ဆိုင်ထက်တစ်ဆိုင် ထပ်တိုးဖွင့်လှစ်နိုင်မယ် ဆိုရင် လက်မှုပညာရှင်များအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပိုမိုရရှိလာနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
Source – Myanmar Home & Decor Magazine ( Volume-6, Issue – 3)
Photo By – Pomelo